အညာနွေသည် ပူလောင်လှသည်။သို့သော်..........ဤအပူကို ဂရုစိုက်ပြီး လူသားတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ရပ်ဆိုင်းရမည်ဆိုလျှင် လွန်စွာဆိုးချေမည်။ထို့ကြောင့်လည်း နွားနှစ်ကောင်ရုန်းသော လှည်းကလေးသည်လူ(၄)ဦးကို တင်ဆောင်လျက် ပျဉ်းမပင်ရွာဆီသို့ သွားရာလမ်းအတိုင်း နှင်နေသည်။ လှည်းပေါ်တွင် နွားလှည်းမောင်း ကိုသာမြ၊ရွာလူကြီး ဦးကြွက်နီ၊ ကာလသားခေါင်း ကိုဘဒင်နှင့် ၄င်းတို့သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့သော ဆရာကိုနေနွယ် ပါလေသည်။ကြမ်းတမ်းသောရာသီကြောင့် ဆရာတစ်ယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းပြေးရ
သည်။ ယခုလည်း တစ်ယောက်လာချေပြီ ။
အေးကွဲ့မတရားပူတယ်လို့ဘဲ မင်းတို့အောက်သားလေနဲ့ ပြောရမှာဘဲ ...
ဒါပေမဲ့ဆရာလေးရယ်တတ်နိုင်သလောက်တော့ နေပေးပါ ... ကျနော်တို့ရွာမှာက ကျောင်းကြီးသာရှိပြီးသင်မဲ့ဆရာမရှိဘူး ... တတ်တဲ့လူတွေကတော့ သင်ပြပေးပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ ... ဆရာတစ်ဆူလိုတော့ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ...
ဘကြီး ... ကျွန်တော်နေဖို့ရော ...
အင်း ... ကျုပ်အိမ်မှာဘဲ နေပါလေ ...ကျယ်လဲကျယ် အေးလဲအေးချမ်းတယ်။ ကျုပ်ရယ် ကျုပ်မိန်းမရယ်သမီးရယ် သားရယ်ဘဲရှိတယ်။ သားကတော့ အိမ်ထောင်နဲ့မို့ခြံထဲမှာ တဲအိမ်တစ်လုံး ဆောက်နေတယ်။ ကျုပ်တို့အိမ် အကျယ်ကြီးပါဗျာ ... ဆရာလေးတစ်ယောက် ပိုလာလို့ဘာမှ ဒုက္ခများပါဘူး... အားနားစရာမလိုဘူး ... ကိုယ်ထူကိုယ်ထလိုဘဲ နေပေါ့လေကွာ...
ဒါဆို အဆင်ပြေတာပေါ့အဘရယ် ... ကျွန်တော်ကဒီကိုတမင်လာခဲ့ပေမဲ့ အသိအကျွမ်းရှိတာ မဟုတ်ဘူး ...
ဦးကြွက်နီက ရွာလူကြီးတို့ထုံးစံ သူ့အိမ်မှာသာဆရာကို ထားချင်မှန်း ဆရာကိုနေနွယ်ရိပ်မိသည် ... ထို့ကြောင့်လည်းနားလှည့်ပြီးပါးရိုက်ခြင်းပေ။ ကိုနေနွယ်မှာ ရန်ကုန်သားပီပီရုပ်ရည်ကသားနားသည် အရပ်အမောင်းကောင်းသည်။ အသားဖြူသည်။ ဒါကို ကာလသားခေါင်း ကိုဘဒင်တစ်ယောက် မနာလိုမရှုဆိတ်ဖြစ်နေမိသည်။ ရွာမှ ကွမ်းတောင်ကိုင်ပန်းတောင်ကိုင်တို့အဖို့ အန္တရာယ်များလှသည်။ တစ်ပါးသူနှင့် ငြိစွန်းခြင်းကို လက်ခံရန်မလွယ်ပါ။ အထူးသဖြင့် သူမျက်စိကျနေသော ဦးကြွက်နီသမီးနှင်းဖွေးကို လုံးဝစိတ်မချနိုင် ...
ဆရာ့ကို ကျွန်တော့်အိမ်မှာထားပါလား ...ဘယ်သူမှ ရှိတာမှမဟုတ်တာ ... ပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းလေးမှာ ထားရင်လဲ ရသားဘဲ...ဆရာလွပ်လွပ်လပ်လပ်နေရတာပေါ့
့အိုကွာ ... ငါ့ဆီမှာဘဲ နေပါစေ ... မင်းနှယ် ဘာများလဲလို့
ဦးကြွက်နီနားလည်သည် ... ဒီသေနာ ပါးစပ်ဟသည်နှင့် အူဘယ်နှစ်ခွေရှိသည်ကို သိသည်။ မရ ... ဘယ်တော့မှ သဘောမတူ မပေးစားနိုင် ... ဒီကောင်လိုဂလေနဲ့ သမီးကို သဘောမတူနိုင်။စဉ်းစားရင်းဖြင့် ဦးကြွက်နီ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးမှာ ကင်းမလက်မဲကြီးများလို ထောင်ထလာသည်။ သုံးဦးသားတိတ်ဆိတ်စွာ လှည်း၏ခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါလာကြ၏။ နေအတော်စောင်းမှ ရွာသို့ဝင်မိ၏ ။ ဦးကြွက်နီအိမ်သည် ရွာလယ်တွင် ထည်ထည်ကြီး ရှိလေသည်။
လာ ... ဆရာလေး။ ဒါ ... ကျုပ်အိမ်ဘဲ ...
ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဟန်တို့ ထိန်းမရအောင် လေသံတွေပါနေ၏။ သူကပင် ဆရာကိုနေနွယ်၏ အ၀တ်သေတ္တာကို " မ "ကာ အိမ်ပေါ် တက်သွားလေသည်။ ဆရာမှာ အိပ်ယာ လိပ်ကလေးပိုက်ရင်းနောက်ကလိုက်လာ၏။ ကိုဘဒင်ကတော့ မကျေမနပ်နှင့် ကျန်ခဲသည်။
ဟဲ့ ... သမီးရေ ... သမီး ...
ရှင် ... အဘ ... လာပါပြီ ...
ချိုသာယဉ်ကျေးသောအသံနှင့်အတူ တောအရပ်နှင့် မလိုက်အောင် ချစ်စရာကောင်းလှသော မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထွက်လာ၏ ... တစ်ကိုယ်လုံး သနပ်ခါးဖွေးနေအောင် လိမ်းထားပြီး အရပ်မြင့်မြင့်နှင့်မို့ မြန်မာပီသစွာ လှပနေသည်။ ဆရာကိုနေနွယ်ကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်ရာ မျက်လုံးစူးစူးကြီးများကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် အသာမျက်လွှာချသွားရှာသည်။
သမီး ... ဒါ ဆရာကိုနေနွယ်တဲ့... အဘအိမ်မှာနေမယ်...
ဆရာလေး ... ဒါကျုပ်ရဲ့သမီးလေး မနှင်းဖွေးတဲ့ဗျာမချောလား ...
အို ... အဘကလဲ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး ...
ကဲ ... ညည်းအမေကော ...
အမ အကိုတို့အိမ်မှာ အဘရဲ့  ...
သွားခေါ်ချေ ... တစ်ခါထဲမိတ်ဆက်ပေးရအောင် ...ညည်းအစ်ကိုမိန်းမကိုပါ ခေါ်ခဲ့ချေ ...
ယို့ယို့လေးထိုင်နေရာမှ အသာထကာ နောက်လှည့်ထွက်သွားသော မနှင်းဖွေးကို မျက်လုံးထောင့်ကပ်ခါ အသာခိုးကြည့်လိုက် သည်။ စွင့်ကားသောတင်ပါးမှာ ... ခြေတစ်လှမ်းတိုင်း အိအိတုန်နေသည် ... သေးကျဉ်းသော ခါးလေးမှာ ခြေလှမ်းအလိုက် နွဲ့နေသည်...ကျစ်ဆံမြီးတုတ်တုတ်ကြီးသည် ဒူးဆစ်ထိနေ၏ ။
ကျုပ်သားတော့မရှိဘူး ဆရာလေးရဲ့ ... အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်ကူးသွားနေတယ် ... အင်း ... ဒါပေမဲ့ မရဘူးဗျာ သွားလိုက်ရင် တစ်လနှစ်လကြာတယ် ...လူငယ်ဆိုတော့လဲ တိုးတက်ချင်တာပေါ့ ဆရာလေးရယ်...
ဒါပေါ့ ... ဒါပေါ့ ... သမာဇီဝနဲ့ကြီးပွါးရင် ပိုကောင်းတာပေါ့အဘရယ် ...
အင်း ... ပြောရခက်သားလားဗျာ ...
ကိုကြွက်နီ ... ရှင့်ဆရာကိုဘာမှမကျွေးဘူးလား ...ကြည့်စမ်းပါဦးတော် ... ကထဲမှ ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတာရေနွေးအိုးတောင်မချဘူး ... ရှင့်ဟာလေ ...
အို ... အမေကလဲ ... သမီးလုပ်လိုက်ပါ့မယ် ဆရာနဲ့အဘစကားမပြတ်လို့ပါ ...
မနှင်းဖွေးက လိမ္မာစွာဝင်ပြီး ပြေပြစ်အောင် လုပ်လိုက်၍သာတော်တော့သည် ... မနှင်းဖွေး အမေလည်း အတော်ချောသည် ... အမေတူ သမီးထင်ပါ့ ... နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲဆိုးထားသည် ...
အင်း ... မိန်းမကတော့ ...
ဘာမိန်းမကလဲ ... ရှင်ဧည့်ဝတ်မကျေလို့ ပြောနေရတာ ...
ကဲပါဆရာလေးရယ် ဒါ ... ကျုပ်မိန်းမ မခင်ညိုတဲ့ ... ဒါကကျုပ်ချွေးမ မလှမေတဲ့ဗျာ ...
နင်တို့ဆရာလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံကြနော် ... ငါ့မျက်နှာ အိုးမည်းမသုတ်ကြနဲ့ ...
ဦးကြွက်နီတစ်ယောက် မြွေပွေးကို ခါးပိုက်ပိုက်မိ ခြင်းကိုထိုအချိန်က လုံးဝမရိပ်မိပါပေ ...ထိုညကို ညစာစားပွဲဖြင့် အဆုံးသတ်ကာ အိပ်ယာဝင်ကြ တော့သည်။ ရွာမှ မီးမလင်း လမိုက်ညဖြစ်၍ တစ်ရွာလုံး တိတ်ဆိတ်နေ၏။မနက်တွင် မနှင်းဖွေး မှအပ အားလုံးကိုယ်စီ အပြင်ထွက် နေလေသည်။ ကိုယ်လက်သုတ်သင်ရာ၌ပင် မပြတ်မလပ်ဖြစ်မိသည် ... သူမကျွေးသော ပဲပြုတ်နှင့် ထမင်းစားပြီး ကျောင်းသို့ထွက်ခဲ့သည် ...တစ်နေကုန် အလုပ်တို့ဖြင့်ရှုပ်ပြီး ညနေ(၆) နာရီအိမ်ပြန်ရောက်၏ ...
ဆရာ သိပ်နောက်ကျတာဘဲ ...
စောင့်နေသော မနှင်းဖွေးက အပြစ်တင်သံလေး ဖြင့် ဆိုလိုက်သည်။
ဟုတ်တယ် ... မနှင်းဖွေးရယ် အလုပ်တွေကြုံးလုပ်နေရလို့ နောက်နေ့ဆိုရင်တော့ ဒီလောက်နောက်မကျပါဘူး ... အဘနဲ့အဒေါ်တို့ထမင်းစားပြီးကြပြီလား ...
အင်းစားပြီးပြီ ... ကျမတို့ဆီမှာ စောစောစားတယ်ရှင့် ...
အာ ... တစ်ခါတည်းစားလိုက်လေ ...
မသင့်ပါဘူး ဆရာရယ် ...
အင်း ... ဒုက္ခဘဲ ကျွန်တော်ရေလေးချိုးချင်တယ်၊ ခဏစောင့်နော်ရတယ် ...
ကိုနေနွယ်ထမင်းစားနေစဉ် မနှင်းဖွေးဘေးမှ ထိုင်ကြည့်နေသည်။မီးခွက်အလင်းရောင် အောက်မှာ သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းနေသည်။ ဦးကြွက်နီက ရေဒီယိုကို ကလိနေပြီး ဒေါ်ခင်ညိုကတော့ ချွေးမနှင့်သွားအိပ်သည်။ ကိုနေနွယ်ပြီးတော့ မနှင်းဖွေးထမင်းစားသည်။
နှစ်လကျော်ပြီ ... အိမ်သားတို့နှင့်သာမက ရွာသူရွာသားတို့နှင့်ပါ ရင်နှီးကျွမ်းဝင်မိ၏ ... စာအသင်ကောင်းမှုကြောင့် ကလေးတို့ကလည်း ချစ်ကြသည်။ မိဘတို့ကလည်း လေးစားသည် ။ စနေ တနင်္ဂနွေ အိမ်တွင် အချိန်ပိုသင်၏။ ထိုအခါ မနှင်းဖွေးပါ စာကူပြပေးလေသည် ။ ဤတစ်အိမ်လုံးတွင် ဆရာကိုနေနွယ်မှာ ရွာကိစ္စ၊ လယ်ကိစ္စ၊ အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စတို့နှင့် ရှုပ်နေ သည်။ ဒေါ်ခင်ညိုလည်း မြေပဲခင်းကိုဦးစီးနေရ၍ မအား၊ မလှမေကတော့ ဒီဘက်သိပ်မလာ။ အနေများလာတော့သံယောဇဉ်တွေဖြစ်လာ သည်။ ထမင်းလက်ဆုံစားဖြစ်သည်။ ဘုရားသွားကျောင်းတက် အတူတူဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ရန်ကုန်သား ကိုလူလည် ဆရာကိုနေနွယ်တစ်ယောက် မနှင်းဖွေးကို ချစ်ရေး ဆိုတော့သည်။ ဟိုကလည်း တစ်ပတ်နှစ်ပတ် အိနြေ္ဒဆည်နေပြီးမှ လိုချင်သောအဖြေကိုပေးခဲ့သည် ။
ဆရာလို့ မခေါ်နဲ့ဖွေးရယ် ...
ဟင့်အင်း ... ရှက်ပါတယ် ရှင် ...
မရဘူး ... ချစ်ရင်ခေါ်ရမယ် ...
တခုတော့ရှိသည် မနှင်းဖွေးမှာ ငယ်သူမို့ သူ့မိဘတွေ မရိပ်မိချေ။ပြီးတော့ အလစ်ခိုးနမ်းရုံမှ လွဲ၍ ဘာမှလုပ်မရ၊ သည်တော့ နဂိုက မရိုးသော ကိုနေနွယ်ရိုးတိုးရွတ ဖြစ်လာသည်။ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် မရှုနိုင်မကယ်နိုင်နှင့် အလစ်ကို ချောင်းနေတော့၏။ သို့သော် မနှင်းဖွေးက ပါးနပ်စွာ ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်ချည်းသာ။
ဆရာလေး... ကျုပ်ဒီနေ့ ဟိုဘက်ရွာ ခဏသွားလိုက်ဦးမယ် ...ညအိပ်ပေါ့ဗျာ ... လိုက်ချင်လား ...
မလိုက်တော့ပါဘူးအဘရယ် ... ကျွန်တော်စာနဲနဲ ဖျက်စရာရှိလို့ ...
ို့ကောင်းပြီလေ ... နဲနဲတော့ သတိနဲ့အိပ်နော် ... ဆရာလေး မလိုက်တာပဲ ကျုပ်ဝမ်းသာလှပြီ ... အခုတလော တခိုးပူနေတယ် ...
အင်း ... သားကလဲမရှိတော့ ဆရာလေးကိုဘဲ သားသဘောထားပြီးအားကိုနေရတော့မှာဘဲ ...
ဟုတ်ကဲ့(ယောက္ခမကြီးရယ်) ဟုတ်ကဲ့ ... ကျွန်တော်ကလဲ အဘကို ကိုယ့်မိဘလို သဘောထားပါတယ် ခင်ဗျာ ...
ကိုကြွက် ... အနွေးထည်ယူသွားချည်နော် ပြီးတော့ဓါတ်မီးလဲယူသွား...
အေးပါဟ ... ငါ့နှယ် ဘ၀ကူးတော့မှာ ကျနေတာပဲ ...
ဲကောင်းတယ် ...တော်ဘ၀မြန်မြန်ကူး ကျုပ်နောက်လင်ယူဘို့ ...
တယ် ... ဒီမိန်းမ သွားခါနီးလာခါနီး နမိတ်မရှိနမာမရှိ ...
ကဲပါအစ်မရယ် ... အဘသွားခါနီးလာခါနီး စိတ်တိုအောင် သွားမစပါနဲ့ ....
ကဲ...အဘရော ... ဒီထဲလိုတာတွေ သမီးထည့်ထားတယ် ...
အေး သမီး အေး ... နင့်အမေသာ နင့်တစ်ဝက်လောက် လိမ္မာရင်ငါဒီတစ်သက် မအိုတော့ဘူး ...
လူတကာကို နိုင်နင်းသောသူကြီးကို ဒေါ်ခင်ညိုတစ်ယောက် ဗျောတင်တော့သည်။ သူကြီးမှာ တဟားဟားရီရင်း အသင့်စောင့်နေ သော လှည်းဆီသို့ သုတ်ချေတင်လေပြီ။ ကိုနေနွယ်ရင်ထဲမှာ ဘုရားပွဲလှည့်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဦးကြွက်နီ ခရီးထွက်သည်။ ဒေါ်ခင်ညိုချွေးမနှင့် အိပ်မည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ...မနှင်းဖွေး တစ်ယောက်သာ မိမိနှင့့် ကျန်ရစ်ပေ မည်။ တစ်ခုတော့ရှိသည် မလှမေကို ဤအိမ်ကြီး တွင် လာအိပ်မခိုင်းဖို့ ဆုတောင်းရမည်။ ဒါဆိုရင်တော့ ရခဲတဲ့အခွင့်အရေးလေး လက် လွတ်ရပေမည်။ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့်စောင့်ရင်း အချိန်တို့ ကုန်လွန်လာလေသည်။ ညစာစားပြီး အလ္လာပသလ္လာပ အနည်းငယ်ပြောပြီး အိပ်ရာဝင် ဖို့ ဟန်ပြင်သည်။ ခဏနေတော့ ဒေါ်ခင်ညို ဆင်းသွားပြန်သည်။ ပြီးတော့ပြန်တက်လာပြီး မနှင်းဖွေးအခန်းဆီမှ တိုးတိုးသံတွေ ကြားနေရ သည်။ ဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်။ နေနွယ် မီးမှိတ်ပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသည် ။ ရင်တွင်းမှ ကြိတ်၍ ဆုတောင်းနေသည်ကား ..... မနှင်းဖွေး တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ရစ်ပါစေ ...ခဏကြာတော့ ဒေါ်ခင်ညိုဆင်းသွားသည်။ မနှင်းဖွေးတံခါးလာ ပိတ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
ဟေး ... ဟုကလေးတစ်ယောက်လို မအော်မိစေ ရန် မနဲထိန်းထားရသည် ။ မနှင်းဖွေး အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားသည်။ ထို့နောက် နောက်ဖေးတံခါး ဖွင့်သံကြားရသည်။
အင်း ...အိမ်သာတွေဘာတွေသွားတက်နေတာ ဖြစ်မှာပေါ့ဟု ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်တွေးနေမိသည်။ မနှင်းဖွေး အိမ်သာတက်သည့်အကြောင်း စဉ်းစားရင်း ရင်တွေပူလာသည်။ အတော်ကြာသည်အထိ မလာသေး။ နောက်ဆုံးတော့ တံခါးပြန်ပိတ်သံကြားသည်။ ထို့နောက် ...မနှင်းဖွေးအခန်းမှ မီးခွက်ငြိမ်းသံ အ၀တ်ချင်းပွတ်သံ ကြားရသည်။ ဟန်ဆောင်ဖုံးအုပ်ထားခဲ့ရသော ပညာတို့ကို ပြရမည် ဆိုသောကြောင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေမိသည်။ နာရီဝက်လောက် အောင့်အည်းစောင့်နေသည်။ ပြီးတော့မှ အသာထကာသူခိုးလို ခြေဖျား ထောက်ပြီး မနှင်းဖွေးအခန်းတွင်း ၀င်လိုက်သည်။ တံခါးသည် ဟင်းလင်းပွင့်နေ၍ မိမိကို မျှော်လင့်နေသည်ဟု ကျိန်းသေတွက်လိုက်မိ၏။ သြ ... သူလဲလေလောကီသားပေဘဲ ..... မှောင်ထဲတွင်စမ်းတ၀ါးဝါးနှင့် ခြင်ထောင်ကြိုးကို ၀င်တိုက်မိရာမှ အသာဖမ်းရင်း ခြင်ထောင်လှန်တင်လိုက်သည်။ သင်းပျံသော သနပ်ခါးမွေးမွေးလေးကို ရှုရှိုက်ရင်း မနှင်းဖွေးဘေးမှာ အသာဝင်ထိုင်ပြီး လက်နှင့်ရှောက်ပြီး မရဲတရဲစမ်းမိသည်။ မတော်လို့ အော်မှာကြောက်ရသေး ...သို့သော် မချောက တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ပဲ အိပ်ပျော်နေသည်လား .......နှိုးရခက်မည့် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေခြင်းလား ... အသက်ရှုသံကတော့မှန်လို့ ... လက်ကတဖြည်းဖြည်း စမ်းသွားရာ ရှံသားအကျီ်င်္ပါးအောက်မှ နို့အုံကြီးနှစ်ခုကို အထိတ်တလန့်တွေ့ရသည်။ နို့အုံပေါ် လက်တင်ထားပေမဲ့ ... ဘာမှ မတုန့်ပြန် ... ဧကန္တတော့ မှေးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရှက်ရှာလွန်းလို့ ဘာမှမတုန့်ပြန်သည်ဘဲ ဖြစ်ရမည်။မျက်နှာတော် နုနုကို အသာလိုက်စမ်း ပြီး မေးကိုကိုင်ကာ ခွေလှည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ... အသက်တစ်ဝက်နီးပါး အလေ့ကျင့်လုပ်ယူခဲ့ သည့် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းခြင်းကို စတင်ပြုလုပ် ပါတော့သည်။
" ပြွတ် ... "
ဟင် ... ခေါင်းမွှေးတို့ ထောင်ထကုန်သလား မသိ ... မနှင်းဖွေးနှုတ်ခမ်းသည် နှုတ်ခမ်းနီတို့ဖြင့် စေးကပ်ခါ မွှေးပျံနေသည် ...ဒါ ... ဒါဆို ...နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ ... သန်မာသော လက်နှစ် ဖက်သည် ကိုနေနွယ်ကို ယိုင်လှဲသိုင်းဖက် လာ သည်။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကို ရမ္မက်ပြင်းစွာ စုပ်ယူ နေတော့သည်။ ကိုနေနွယ် ထောင်ချောက် မိလေ ပြီ ။
ဤသည်မှာ မနှင်းဖွေးမဟုတ်။ မနှင်းဖွေးသည် နှုတ်ခမ်းနီဘယ်တော့မှမဆိုး။ သဘာဝ သန္တာ ရောင်နှုတ်ခမ်းနှင့် သာနေသည်။ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုး သည်ကား ...မနှင်ဖွေးအမေ ဦးကြွက်နီမိန်းမ ဒေါ်ခင်ညိုပေတည်း။ အခုမှ ရုန်းလည်း ထအော် ခဲ့သော် ...မခက်လား။ ဒါကြောင့် မီးစင်ကြည့်ကရုံ။ ။ မနှင်းဖွေးမဟုတ်တော့ သိပ်အားမနာတော့ပဲ မို့မောက်နေသော ရင်သားအစုံ ကို လက်နှင့်ညှစ်ကာ သူမ၏နှုတ်ခမ်းကို ရန်ကုန်အရသာ ပေး၍ စုပ်ပစ်လိုက်သည်။ ဘယ်လောက်ခေတ်ဆန်သည်ပြောပြော ရန်ကုန် သူတွေကိုလိုက်မမှီ။ ရန်ကုန်သားတွေကို လိုက်မမှီ။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်သားတို့နှင့် တွေ့ လျှင် နောက်ကောက်ကျရမည်သာ ... ယခုလည်းကြည့် ..ဒေါ်ခင်ညိုသည် နှုတ်ခမ်းစုပ် ရုံမျှဖြင့် အသက်ရှုမြန်လာကာ ဆန္ဒ တက်ကြွလာ သည်။ အလိုးခံဖို့နားလည်သည်။ဒီလိုပဲ ဘ၀တစ်လျှောက် နေခဲ့တာပဲ။ ကာမသျှတ္တရပညာကျမ်းကို နားမလည်၊ အလိုးခံခြင်းသာ နားလည်သည်။ ဒါပဲအရသာရှိသည်။ အရသာကို ပွားစည်းအောင် မလုပ်တတ်ပြီးတော့ ...ကလေးလီးကလွဲ၍ အရွယ်ရောက် လူကြီးလီးကိုမမြင်ဖူး ... လင်ရသည်နှင့်မီးခွက်ငြိမ်း ထမီလှန်၊ပုဆိုးလှန် လုပ်ခြင်းသာနားလည်သည်။
အခုတော့ ...နေနွယ် အကိုင်အတွယ်တွေက သိပ်ငြင်သာသည်။သေသပ်သည် ။ဒေါ်ခင်ညို၏ ရမ္မက်ကို ဟုန်းဟုန်းတောက်စေသည်။
"ဟင်း ... ဟင်း ..."
စကားမပြောရဲ ။ထို့ကြောင့် အော်သံလိုလို အသံမျိုး လည်မြိုမှ ထုတ်ပြီး အချက်ပြသည်။ သို့သော်ဆရာကိုနေနွယ်ကတော့ ခပ်တည်တည်။သူများကိုထားရစ်ပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည်။ ဒီကောင် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ... အော်...်အ၀တ်ချွတ်နေတာပဲ... ဟင်း..!! မြို့သားတွေ အရှက်ကိုမရှိဘူး။ခဏချင်းကိုနေနွယ် မိမွေးတိုင်း၊ ဖမွေးတိုင်းဖြစ်သွားသည်။
မရဘူး ထွန်းမယ် ...
ဒေါ်ခင်ညိုစကားအဆုံးမှာ ဖယောင်းတိုင်နှစ်တိုင်ပါ ကပ်ထွန်းသွားပါတယ်။ မီးခွက်ပါမကဘူး ...ဖယောင်းတိုင်ပါ ထွန်းတာ ကိုး။ ဒေါ်ခင်ညိုကတော့ မှောက်ရက်ကြီးအိပ်ကာ မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးနှင့်ကပ်ပြီး ၀ှက်ထားသည်။ ကိုနေနွယ် ခြင်ထောင်ဖြုတ်ပြီးလုံးပစ်လိုက်သည်။ လွပ်လပ်သွားပြီ...အခုမှ ဒေါ်ခင်ညိုအလှကို သေချာကြည့်မိသည်။ အရပ်မြင့်မြင့်မို့ ကိုယ်ခန္တာ အဆက်အပေါက် ကြည့်ကောင်းလှသည်။ မှောက်အိပ်နေလို့ ဧရာမဖင်ကြီးတွေ ကော့ပျံနေ သည်။ ခါးနဲနဲလေးတုတ်ပေမဲ့ ပုံမပျက်။ ပိုလို့ တောင်ခန့်နေသေးသည်။ ပေါင်တံတွေကတော့ ရွှေဘိုမင်းအကြိုက်ပေပဲ။ အသားနည်းနည်းညိုသည်။ ဆံပင်ကတော့ ကောင်းလှသည်။
ဒီလောက်ပြောရခက်တာ ဆတ်ကနဲထဘီကို ကိုင်ပြီးဆောင့်ဆွဲလိုက်သည်။ ပြေလျော့လျော့ထဘီသည်လျောကနဲ ကွင်းလုံးကျွတ်သွားလေတော့သည်။ ဒေါ်ခင်ညိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ရှက်သလဲဆိုရင် ...ဖင်တွေတောင် တဆက်ဆက်တုန်နေသည်။ ကိုနေနွယ်သည် သူမပေါင်တံမွတ်မွတ် တလျောက်လက်ဖြင့် အသာပွတ်၍ တဖြေးဖြေးနှင့် ဖင်ကြီးကိုပါ ပွတ်ပေးနေသည်။ ထိုမှတဆင့် ဖင်ကြားကို လက်ခလယ်နှင့်ပွတ်နေပြန်သည်။ဒေါ်ခင်ညိုခမြာ ဖင်ကြီးကိုကော့ပျံနေရှာသည်။ စောက်မွှေးထူထပ်လှတော့ စောက်ပတ်ကို သွားထိမိလေသည်။အပေါက်ကလေးသို့ လက်ခလယ်ဖြင့် ရှေ့တိုးနောက်ငင် ပြုလုပ်ပေး နေသည်။
ဟင်း ... ဟင်း ယားတယ်တော်...
ယားရင် ဒီဘက်လှည့် လိုးချင်လှပြီ ...
အင်မတန် အလိုးခံချင်သည့် မိန်းမကို ဒီလိုပဲ ခေါ်တာမဟုတ်လား။ ဒေါ်ခင်ညိုမလှည့်ချင် လှည့်ချင် ပက်လက်လှန်လိုက်လေသည်။ အနည်းငယ်ဖြူသယောင်ရှိသော ၀မ်းဗိုက် အောက်မှ စောက်ဖုတ်အမွှေးကြမ်းတို့ဖြင့် အရိုင်းသဘာဝကို လှစ်ဟပြနေသည်။ နို့နှစ်လုံးမှာ သားကောင်းမိခင် ပီသကြောင်းပြသနေသည်။ အကီင်္ျကြယ်သီးများကို ဖြုတ်ချလိုက်ကာ နို့အုံကိုလှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ ဒေါ်ခင်ညိုခမြာတော့ ရှက်လွန်း၍ မျက်နှာကိုလက်ဖြင့်အုပ်ထားလေသည်။
ကိုနေနွယ်သည် ဒေါ်ခင်ညိုမျက်နှာပေါ်မှ သနပ်ခါးကို လျှာဖြင့်ယက်နေသည်။ ခါးသက်ငံကျိသောအရသာကို သဘောတွေ့နေ သည်။ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် နို့အုံကိုကိုင်ပြီး နို့သီးကိုချေပေးနေသည်။ တစတစနှင့် နို့သီးများထောင်ထလာသည်။ လက်တဆစ်စာလောက် ရှိသည်။ နို့အုံထိပ်တွင် မိုင်တိုင်တစ်ခုလို မားမားမတ်မတ်ကြီး ထောင်နေသည်။ ကိုနေနွယ်မနေနိုင်တော့ ဒီလောက်ကြီးမားသည့်နို့ကြီးတွေကို အားရပါးရစို့ချပစ်လိုက်သည်။ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုက်စားပစ်လိုက်ချင်သည်။ အမြဲတမ်းအလုပ်နှင့်လက် မပြတ်သူမို့ အသားအရေက အရွယ်နှင့်အတူကျမသွား တင်းရင်းပြီး ငယ်သွေးကို ထိန်းထားနိုင်ဆဲ။ နို့သီးကို ပထမဆုံးနှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိညှစ်ပစ်လိုက် သည်။
အို ... ဘာတွေလုပ်နေမှန်း မသိပါဘူးနော်...ဒုက္ခပါပဲ...
ရှက်ရွှံစွာဆိုလေသည်။ သို့သော် မခံစားမှီကပင် အရသာကို တောင့်တနေသူမဟုတ်ပါလား ။ နို့အုံကြီးမှာ ဘောလုံးကြီးလို ဖောင်းတင်းလာ သည်။ နို့သီးထိပ်မှ နို့ရည်ကြည်တို့ တစိမ့်စိမ့် ထွက်လာသည် ။ရင်ဘတ်ကြီးကို ကော့ကော့ ပေးလာသည်။
ဟင်း ... ဟင်း ... ဆရာရယ်... ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲတော့... ဒီကလူသေတော့မယ်...
ဒေါ်ခင်ညိုနွေညလယ်မှာ ငှက်ဖျားတက်နေရှာသည်။ မိမိကိုယ်ကို မသိလိုက်မှီမှာပင် ကျန်နို့တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့်ပွတ်သတ်နေမိသည်။ ဆရာ့လက်တို့သည် မှင်နှင့်စောက်ဖုတ် အပ်ချစရာ နေရာမရှိအောင် ပွတ်သတ်နေလေသည်။ စောက်ဖုတ်ကိုအုပ်ပြီး အမွှေးကြမ်းတို့ကို ထိုးဖွကစားနေသည်။ အချိန်ကအပိုအလိုမရှိပဲ နောက်နို့တစ်ဖက်ကို ပြောင်းစို့လေသည်။ ဒေါ်ခင်ညိုစိတ်တွင်း၌ဆရာ့ကိုလင်သားဖြစ် လိုက်ပါတော့ဟု လိုလိုလားလား တောင့်တ မိသည်။ သူ့ပေါင်ကြီးသည် သူမပေါင်ကို ခွထားသောကြောင့် ငပဲကြီးက ဒေါ်ခင်ညိုကို ပွတ်သပ်မြူဆွယ်နေသည်။ နေနွယ်က ဒေါ်ခင်ညို လက်ကိုယူပြီး သူ့လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ ကြမ်းတမ်းသောလက်သည် နူးညံ့ပြီး ကတ္တီပါ သားလို လီးကြီးကိုဆုပ်ကိုင်မိလေသည်။ ဆုပ်မိသော မလွတ်တော့ ။ တစ်ခါမှ ဒါမျိုးမကိုင်ဖူးဘူး။ လင်နှင့်မယားသာနှစ် ၂၀ ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လီးကိုသေချာမကြည့်ခဲ့ ... စိတ်ရိုင်းတို့ ထာဝရရှိသော်လည်း အခြေအနေကြောင့် ချွန်းအုပ်ခဲ့ရသည်။ ယခုတော့ ...
" ဒေါ်ခင်ညို ...."
ကိုယ့်နားကိုယ်မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့သြသွားမိသလို၊ ဒီလောက်အသက်၁၅နှစ်လောက်ကွာနေတာကို အားမနာပါးမနာ ပြောရဲလေခြင်း၊ ဒေါသထွက်သွားမိသည်။
"လီးစုပ်ပေးရမယ်လို့ ... ဒါမှ ... ဒေါ်ခင်ညိုကိုကြာကြာလိုးပေးနိုင်မှာပေါ့၊ အခုချက်ချင်းလိုးရင်မြန်မြန်ပီးသွားမယ် ..."
"အို ... ကျုပ်မစုပ်တတ်ပါဘူး ..."
"အာဟား...မရွံ့ပေါင် ကျွန်တော်တောင်ဒေါ်ခင်ညိုစောက်ဖုတ်ကို လျှာနဲ့ယက်ပေးဦးမှာ ..."
"အို... ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲ၊ နားရှက်စရာတွေ ..."
"နားရှက်ရင် ခိုင်းတာလုပ်ပေးလေ ..."
ဘာသံမှမထွက်ပဲ ငြိမ်နေလို့ သဘောတူပြီဆိုတာသိလိုက်သည်။
မရဲတရဲပါးစပ်အရင်းကို အ၀င်ခံလိုက်၍ နွေးပြီးနူးညံ့သည့် အတွေ့သည် သူမကို လျှပ်စစ်ဓါတ်နှင့်တို့လိုက်သလို တွန့်သွားစေသည်။ နေနွယ်သည်လည်းပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဟထားရ၏။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 10:17